Mota dzemapurisa dzorwisa Covid-19 | Kwayedza
Mota dzemapurisa dzorwisa Covid-19
22 Aug, 2020 - 07:08 2020-08-22T07:51:42+00:00 2020-08-22T07:51:42+00:00 0 Views
CHIKAMU chemapurisa eZimbabwe Republic Police, cheSupport Unit, chiri kurwisa kupararira kweCovid-19 kuburikidza nekusevenzesa motokari dzinoshandiswa mukuchengetedza runyararo kufirita nzvimbo dzakasiyana nemushonga unouraya hutachiona hwecoronavirus uho hunokonzera Covid-19.
Motokari yemapurisa ichifirita mushonga unouraya hutachiona hwecoronavirus uho hunokonzera covid-19 muguta reBulawayo.
Mutauriri weSupport Unit munyika, Inspector Norman Chisare, vanoti chikamu chavo chakaona zvakakodzera kuti vashandise motokari idzi kurwisa kupararira kweCovid-19.
“Tine motokari dzedu dzinoshandiswa zvakasiyana sekuchengetedza runyararo idzo tinodaidza kuti Public Order Vehicles, saka tiri kutenderera kumatunhu akasiyana tichishandisa motokari idzi kufirita mishonga yekudzivirira Covid-19,” vanodaro Insp Chisare.
Vanoti chirongwa ichi chakatanga mumwedzi waKurume gore rino apo pakatangawo kuonekwa chirwere ichi kumurwere wemuZimbabwe.
“Chinodiwa kana vanhu vachida kufiritirwa zvivakwa kana nzvimbo dzavo pachishandiswa motokari idzi, vanoenda kumuzinda mukuru wemapurisa kuPGHQ vonotaura nevakuru variko,” vanodaro Insp Chisare.
Vanoti mapurisa ndeevanhu, saka anofanirwa kuvabatsira panguva yakaita seino yekurwisa chirwere chanetsa uye chisati chawanirwa mushonga wekuchirapa pasi rose ichi.
“Nekuda kwechirwere ichi, tiri kushanda nemapazi anosanganisira rezveutano nechinangwa chekumisa Covid-19.”
Insp Chisare vanoenderera mberi vachiti, “Tiri kunyanya kuenda kunomwaya mishonga iyi kumigodhi nekumayunivhesiti. Musi uno, takaenda kunofirita kuWomen’s University in Africa.”